🥇 पसलको लागि कार्यक्रम
रेटिंग: 4.9. संगठनहरूको संख्या: 788
शपको लागि प्रोग्रामको भिडियो
अन्तरक्रियात्मक प्रयोगकर्ता पुस्तिका संग डेमो संस्करण
पसलको लागि प्रोग्राम अर्डर गर्नुहोस्
एक पसलमा स्वचालनका लागि सँधै विशेष स्टोर सफ्टवेयर आवश्यक पर्दछ, जसले प्राय: तपाईको गतिविधिको विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने धेरै कार्यक्रमहरू समावेश गर्दछ। स्टोरको लेखामा हाम्रो युएसयू-सफ्ट सफ्टवेयर पूर्ण समाधान हुन्छ, जब एक स्टोर लेखा सफ्टवेयरले अन्य धेरैलाई बदल्छ। तपाईं स्टोरमा ठीकसँग नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईंसँग आफ्नो पसलमा त्यस्तो प्रणाली छैन भने। यस सफ्टवेयरको साथ तपाईले प्रोग्राममा जानकारी भण्डार गर्न कत्ति सजिलो छ देख्नुहुनेछ। तपाईं पसलको प्रोग्राममा देख्नु हुने पहिलो चीज भनेको एक साधारण इन्टरफेस हो। त्यहाँ तपाईं केवल बिक्री, भुक्तानी, नयाँ उत्पादनहरूको अर्डर गर्न सक्नुहुन्न, तर सूची पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र बारकोड स्क्यानर भएकोले तपाईंले यसलाई मैन्युअल्ली गर्नुपर्दैन। बारकोड स्क्यानरको साथ, प्रयोगकर्ता प्राय: आधुनिकीकरणको समस्याको सामना गर्दछ। हामीले प्रस्ताव गरेको पसलको लेखा सफ्टवेयरले विभिन्न प्रकारका स्क्यानरहरूको साथै कारखाना बारकोडहरूलाई समर्थन गर्दछ। हामीले प्रबन्धन रिपोर्टहरूको एक पूरै सेट आविष्कार गरेका छौं जुन तपाईं सफ्टवेयरमा व्यक्तिगत रूपमा सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रा विशेषज्ञहरू, तपाईंको अनुरोधमा, थप रिपोर्टहरू सिर्जना गर्न सक्दछन्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यस प्रणालीको पसलको लागि तपाईले पैसाको आन्दोलन मात्र होइन सामानको चालचलन देख्न सक्नुहुनेछ, साथै कामदारहरूको कामका बारे रिपोर्ट पनि पाउनुहुनेछ। यस लेखा अनुप्रयोगको माध्यमबाट भण्डारमा गहिरो लेखा लिनुहोस्!
किन यति ठूलो संख्यामा इन्टरनेटमा विज्ञापन गरिएका नि: शुल्क कार्यक्रमहरूमा भर पर्दैन? त्यहाँ धेरै कारणहरू छन्, तर हामी सब भन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको बारेमा बताउन चाहन्छौं। पहिलो, यो अत्यन्त असम्भव छ, र असम्भव पनि छ, त्यस्ता प्रणालीहरू साँच्चिकै स्वतन्त्र हुनेछ। कुनै प्रोग्रामरले बिना कुनै निःशुल्क रुपमा कसैलाई दिनको लागि यस्तो जटिल प्रणाली बनाउनको लागि समय र प्रयास खर्च गर्दैन। जो कोहीले पसलको लागि जटिल एकाउंटीires प्रोग्राम प्राप्त गर्दछ बिभिन्न मुद्दाहरूको समाधानका लागि समर्थन प्रणालीमा स्थायी जडान आवश्यक छ। र त्यसपछि यस समयमा शप व्यवस्थापन र गुणस्तर लेखाको कार्यक्रमका सिर्जनाकर्ताहरू, जुन सित्तैंमा हुनुपर्दछ, तपाईंलाई केहि कार्यहरूमा पहुँच दिन पैसा माग गर्नुहोस् र यसले जान्छ कि तपाईं डाउनलोड गर्न «भाग्यशाली were भएको संस्करण पूर्ण छैन, तर एक प्रदर्शन मात्र तपाईंलाई एक नि: शुल्क प्रणालीको प्रतिज्ञा गरिएको थियो, र यो सकियो कि तपाईं अन्तमा यो प्राप्त गर्नुहुन्न। तपाईंले कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्न जसले तपाईंलाई यसको उत्पादनको प्रयोगमा चलाउँछ। हामी पूर्ण पारदर्शी र इमान्दार सम्झौता प्रस्ताव गर्दछौं - तपाईंले शपको लागि प्रोग्राम छनौट गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु अघि डेमो संस्करण प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् - तपाईं यसलाई हाम्रो आधिकारिक वेबसाइटमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं केहि सन्तुष्ट छैन भने, हामीलाई थाहा दिनुहोस्। हामी यसलाई सुधार्न खुशी छौं र ठ्याक्कै मिल्दछ जुन तपाईंलाई सुहाउँछ।
हामी नयाँ अफरहरूको लागि खुला छौं र केहि नयाँ प्रयास गर्न खुशी हुनुहुन्छ। दोस्रो, हामी तपाइँलाई एक प्रमाणित तथ्यहरू बताइरहेका छौं - यस प्रकारको शपको लागि प्रोग्रामहरू, नि: शुल्क डाउनलोड गरिएको, १००% अपूर्ण, अपूर्ण, धेरै त्रुटिहरू छन् र कुनै पनि हिसाबले तपाइँको डेटाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन। पसलहरूको लेखा र व्यवस्थापनको त्यस्ता कार्यक्रमहरूले तपाईंको व्यवसायको काममा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदछ, खराबीलाई निम्त्याउँदछ, असफलता निम्त्याउँछ र अन्तत: तपाईंको सफल प्रयासको लागि खर्च गरेको सबै प्रयास, समय र पैसाको पतन हुन्छ। यो हुनबाट रोक्नको लागि, माउसट्र्यापमा फ्रि पनीरको शिकार नहुनुहोस्, र सीधा पेशेवरहरूमा जानुहोस्। हामीले एउटा अनौंठो प्रणाली विकास गरेका छन जुन तपाईंको पसलको कामलाई अनुकूलन गर्दछ, तपाईंको डाटा सुरक्षा दिनेछ र कुनै पनि केसमा नकरात्मक नहुन सक्छ। सही छनौट गर्न कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ याद गर्नुहोस्।
पसलको लागि प्रणाली दुबै सानो र मध्यम र अधिक यति धेरै ठूला व्यवसायहरू द्वारा प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको छ। कुनै पनि कार्यप्रवाह जुन कुनै तरिका ट्रेडसँग सम्बन्धित छ त्यस्तै डाटाको ठूलो मात्राको स्वचालनको आवश्यक पर्दछ। पसलको लागि स्वचालन र व्यवस्थापन कार्यक्रम पूर्ण रूपमा नयाँ पुस्ताको कार्यक्रम हो। तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरूको अगाडि त्यस्तो नवप्रवर्तनको बारेमा घमण्ड गर्नु जरुरी छैन। पहिले कार्यको प्रक्रियालाई अप्टिमाइज गर्नुहोस्, डेटा व्यवस्थित गर्नुहोस्, बिक्री बिक्री र उत्पादनहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्। र, तदनुसार, तपाईले स्थापना गर्नु भएको अटोमेसन र आधुनिकीकरणको नयाँ प्रोग्रामको बारेमा गर्व नगर्नुहोस्, तर नतीजाको बारे जुन एकदम थोरै समयमा हासिल हुन्छ। हामी यसको ग्यारेन्टी दिन्छौं। यस प्रणालीको साथ, तपाईं तपाईंको व्यवसायमा संरचना सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, जुन डाटाको ठूलो मात्रामा प्रदर्शन र विश्लेषण गर्दछ, सटीक रिपोर्टहरू र सही परिणामहरू दिँदै।
हाम्रो काम तपाईलाई खुशी पार्नु हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो अनौंठो कार्यक्रम सिर्जना गर्न कुनै मेहनत, कुनै साधनहरू छोडेनौं। यसलाई प्रयोग गरेर तपाईले देख्नुहुनेछ कि हामी आफैंले यस कार्यक्रममा लगानी गरेका छौं यसलाई प्रयोग गर्न यथा सजिलो, सिक्न सजिलो र कार्यक्षमतामा धनी बनाउन। शपको लागि कार्यक्रम उत्तम रूपमा कार्य गर्दछ र असफलता वा त्रुटिहरूमा नेतृत्व गर्दैन। बजार मा हाम्रो अस्तित्व को धेरै वर्ष को लागी, हामी एकल गुनासो प्राप्त भएको छैन। यो गुणको सूचक हो। हामी मान्दछौं कि हाम्रा ग्राहकहरूले हामीलाई छनौट गरेका छन्, त्यसैले हामी कुनै पनि मुद्दाहरूको ख्याल राख्छौं र टेक्निकल समर्थनको उच्चतम गुणवत्ता प्रदान गर्दछौं। यदि तपाइँ हाम्रो ग्राहकहरु मध्ये एक बन्न चाहानुहुन्छ भने, हाम्रो वेबसाइट मा जानुहोस्, हामीलाई लेख्नुहोस्, र एक नि: शुल्क डेमो संस्करण स्थापना गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस्। हामी तपाईंको व्यावसायलाई स्वचालित बनाउन मद्दत गर्दछौं!
पसल प्रबन्धनको अनुप्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्न सकिन्छ। त्यहाँ कार्यक्रम को विभिन्न संस्करणहरु छन्। यस बाहेक, त्यहाँ धेरै भाषाहरू छन् जुन कार्यक्रम अनुवाद गरिएको छ। नतिजाको रूपमा, कुनै पनि देशहरूमा प्रणाली प्रयोग गर्नमा कुनै समस्या हुनेछैन। यस समयमा तपाईको ट्रेडि trading्ग संगठनको लागि बाँकी रहेको मात्र कार्यको प्रयास गर्नुका साथै यसलाई कार्यमा देख्नका लागि स्थापना गर्नु हो। तपाईको अगाडि खोल्न गइरहेका फाइदाहरु तपाईलाई चकित पार्न निश्चित छन्।